Mpịakọta gluing n'elu 1100mm Ndị na-emepụta & ndị na-eweta ngwaahịa - China mpịachi Gluing n'elu 1100mm Factory
ZH-2300DSG Semi-Automatic iberibe abụọ Katọn mpịachi Gluing Machine
A na-eji igwe maka mpịachi na gluing nke akwụkwọ abụọ dị iche iche (A, B) iji mepụta igbe katọn corrugated.Ọ na-eji usoro servo siri ike na-aga n'ihu, akụkụ ziri ezi dị elu, dị mfe maka ntinye na Nlekọta.A na-eji ya eme ihe maka nnukwu igbe katọn.
Model JX-2300/2800 igwe bụ multi-arụ ọrụ, tumadi maka ọkara ngwugwu, gụnyere 300g -800g kaadiboodu, 1mm-10mm corrugated ngwugwu.Nwere ike na-emepụta abụọ folds, okuku mkpọchi ala igbe packaging.the igwe na-emepụta na E,C,B,A,AB,EB ise facer corrugate osisi, ma ọ bụ Die-ịcha na flex-ebi akwụkwọ slotted corrugated osisi ihe, ogologo ahịrị, abụọ folds. , katọn mkpọchi ala ala.
Model JX-1700 igwe bụ multi-arụ ọrụ, tumadi maka ọkara ngwugwu, gụnyere 300g -800g kaadiboodu, 1mm-10mm corrugated ngwugwu.Nwere ike na-emepụta abụọ folds, okuku mkpọchi ala igbe packaging.the igwe na-emepụta na E,C,B,A,AB,EB ise facer corrugate osisi, ma ọ bụ Die-ịcha na flex-ebi akwụkwọ slotted corrugated osisi ihe, ogologo ahịrị, abụọ folds. , katọn mkpọchi ala ala.
Model EFOLD-2100 igwe bụ multi-arụ ọrụ, tumadi maka ọkara ngwugwu, gụnyere 300g -800g kaadiboodu, 1mm-10mm corrugated ngwugwu.Nwere ike na-emepụta abụọ folds, okuku mkpọchi ala igbe packaging.the igwe na-emepụta na E,C,B,A,AB,EB ise facer corrugate osisi, ma ọ bụ Die-ịcha na flex-ebi akwụkwọ slotted corrugated osisi ihe, ogologo ahịrị, abụọ folds. , katọn mkpọchi ala ala.
Model EFOLD-1500 igwe bụ multi-arụ ọrụ, tumadi maka ọkara ngwugwu, gụnyere 300g -800g kaadiboodu, 1mm-10mm corrugated ngwugwu.Nwere ike imepụta mpịaji abụọ, nkwakọ akụ mkpọchi ala igbe.The igwe na-arụpụtakwa na E, C, B, A, AB, EB ise facer corrugate osisi, ma ọ bụ Die-ịcha na flex-ebi akwụkwọ slotted corrugated osisi ihe, ogologo ahịrị, abụọ folds, okuku mkpọchi ala katọn.